Jizọs Akụziere Nwaanyị Sameria Ihe | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
JIZỌS AKỤZIERE NWAANYỊ SAMERIA NA NDỊ ỌZỌ IHE
ỤDỊ OFUFE CHINEKE NA-ANABATA
Mgbe Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya si Judia na-aga Galili, ha si na Sameria gafere chee ihu n’ebe ugwu. Ike bịara gwụ ha n’ihi ogologo ije ha garala. Mgbe o ruru oge ehihie, ha kwụsịrị n’ebe dị obodo Saịka nso ka ha zurutụ ike n’akụkụ otu olulu mmiri. O nwere ike ịbụ Jekọb gwuru olulu mmiri a ọtụtụ narị afọ tupu oge Jizọs, ma ọ̀ bụkwanụ ya abụrụ na o goro ndị mmadụ ka ha gwuo ya. A ka nwekwara ike ịhụ olulu mmiri ahụ ugbu a n’ebe dị nso n’obodo Nablọs, nke dị na Palestaịn.
Ka Jizọs nọ na-ezurutụ ike n’akụkụ olulu mmiri ahụ, ndị na-eso ụzọ ya gawara n’ime obodo dị nso ebe ahụ ka ha zụta ihe oriri. Mgbe ha pụrụ, otu nwaanyị Sameria bịara isere mmiri. Jizọs sịrị ya: “Nye m mmiri ka m ṅụọ.”—Jọn 4:7.
Ndị Juu na ndị Sameria anaghị emekọ ihe n’ihi ajọ mkpọrọmasị ha kpọrọ onwe ha. N’ihi ya, ihe ahụ Jizọs kwuru juru nwaanyị ahụ anya. Ọ jụrụ Jizọs, sị: “N’agbanyeghị na ị bụ onye Juu, olee otú i si na-arịọ m ka m nye gị mmiri ka ị ṅụọ, ebe m bụ nwaanyị Sameria?” Jizọs zara ya, sị: “A sị na ị maara onyinye Chineke na-enye n’efu na onye na-asị gị, ‘Nye m mmiri ka m ṅụọ,’ ị gaara arịọ ya, ọ gakwaara enye gị mmiri na-enye ndụ.” Nwaanyị ahụ zaghachiri ya, sị: “Nna anyị ukwu, i nwedịghị ihe e ji esere mmiri, olulu mmiri a mikwara emi. Oleezi ebe i si enweta mmiri a na-enye ndụ? Ị kaghị nna nna anyị Jekọb, bụ́ onye nyere anyị olulu mmiri a, onye ya na ụmụ ya na anụ ụlọ ya ṅụkwara mmiri si na ya, ka ị̀ ka ya?”—Jọn 4:9-12.
Jizọs gwara ya, sị: “Onye ọ bụla nke ṅụrụ mmiri a, akpịrị ga-akpọ ya nkụ ọzọ. Onye ọ bụla ṅụrụ mmiri nke m ga-enye ya, akpịrị agaghị akpọ ya nkụ ma ọlị, kama mmiri nke m ga-enye ya ga-aghọ n’ime ya isi iyi nke mmiri na-asụpụta asụpụta inye ndụ ebighị ebi.” (Jọn 4:13, 14) Ọ bụ eziokwu na ike gwụrụ Jizọs, ma o meghị ka ọ ghara ịgwa nwaanyị Sameria ahụ eziokwu nke na-enye ndụ.
Nwaanyị ahụ gwaziri ya, sị: “Nna anyị ukwu, nye m mmiri a, ka akpịrị ghara ịkpọ m nkụ, ka m gharakwa ịdị na-abịa ebe a isere mmiri.” Jizọs meziri ka ọ̀ gbanwere ihe ha na-ekwu, ma sị ya: “Gaa kpọrọ di gị bịa ebe a.” Ọ sịrị Jizọs: “Enweghị m di.” Mana ahụ́ nwụrụ ya mgbe ọ matara na Jizọs ma ya nke ọma. Jizọs sịrị ya: “I kwutere ya, sị, ‘Enweghị m di.’ N’ihi na i nweela di ise, nwoke gị na ya bi ugbu a abụghị di gị.”—Jọn 4:15-18.
Nwaanyị ahụ ma na ihe Jizọs kwuru bụ eziokwu. O rikwara ya ọnụ. Ọ gwaziri Jizọs, sị: “Nna anyị ukwu, ana m aghọta na ị bụ onye amụma.” O gosiziri na ya nwere mmasị n’ihe gbasara ofufe Chineke. Olee otú o si gosi ya? Ọ gwara Jizọs, sị: “Nna nna anyị hà fere Chineke n’ugwu a; ma unu na-ekwu na ọ bụ na Jeruselem ka ndị mmadụ kwesịrị ịnọ fee Chineke.”—Jọn 4:19, 20.
Ma, Jizọs kọwaara ya na ihe dị mkpa abụghị ebe mmadụ nọ na-efe Chineke. Ọ sịrị ya: “Oge awa na-abịa mgbe ọ na-agaghị abụ n’ugwu a ma ọ bụ na Jeruselem ka unu ga-anọ fee Nna m ofufe.” Ọ gwakwara ya, sị: “Oge awa na-abịa, ọ bụkwa ugbu a, mgbe ndị na-efe ezi ofufe ga-efe Nna m n’ime mmụọ na n’eziokwu, n’ihi na, n’ezie, Nna m na-achọ ka ndị dị otú ahụ fee ya ofufe.”—Jọn 4:21, 23, 24.
Ihe Chineke chọrọ n’aka ndị na-efe ya ofufe abụghị ebe ha nọ na-efe ya, kama, ọ bụ otú ha si efe ya ofufe. Ihe ahụ o kwuru masịrị nwaanyị ahụ. Nwaanyị ahụ sịrị ya: “Amaara m na Mesaya na-abịa, bụ́ onye a na-akpọ Kraịst. Mgbe ọ bụla ọ bịara, ọ ga-agwa anyị ihe niile hoo haa.”—Jọn 4:25.
Jizọs kpugheziiri ya otu eziokwu dị mkpa. Ọ sịrị ya: “Ọ bụ mụ onwe m nke na-agwa gị okwu bụ ya.” (Jọn 4:26) Chebagodịrị ihe a merenụ echiche. Naanị mmiri ka nwaanyị a bịara isere n’ehihie a, ma Jizọs nyere ya ihe ùgwù pụrụ iche. Ọ gwara ya n’ezoghị ọnụ ihe ọ na-agwabeghị ndị ọzọ, ya bụ, na ọ bụ ya bụ Mesaya ahụ.
ỌTỤTỤ NDỊ SAMERIA EKWERE NA YA
Ndị na-eso ụzọ Jizọs si na Saịka buru ihe oriri lọta. Ha hụrụ ya n’akụkụ olulu mmiri Jekọb ahụ, ebe ọ nọ mgbe ha pụwara. Mana ya na otu nwaanyị Sameria nọzi na-akparịta ụka. Mgbe ndị na-eso ụzọ Jizọs lọghachiri, nwaanyị ahụ hapụrụ udu mmiri ya ebe ahụ bawa n’ime obodo.
Ozugbo nwaanyị ahụ rutere Saịka, ọ kọọrọ ndị obodo ahụ ihe Jizọs gwara ya. O ji obi ya niile gwa ha, sị: “Bịanụ hụ nwoke gwara m ihe niile m mere.” Ọ jụrụ ha, sị: “Ọ̀ ga-abụ onye a bụ Kraịst?” (Jọn 4:29) Ọ ga-abụ na ihe mere o ji jụọ ha ajụjụ a bụ ka ọ chọpụta ihe ha chere. Ajụjụ a gbasara otu ihe dị ndị mmadụ ezigbo mkpa a nọ na-achọ azịza ya kemgbe ụbọchị Mozis. (Diuterọnọmi 18:18) Ihe a mere ka ndị obodo ahụ pụta ka ha jiri anya ha hụ Jizọs.
Tupu ha erute, ndị na-eso ụzọ Jizọs nọ na-arịọ ya ka o rie nri ha wetere. Ma, ọ zara ha, sị: “M nwere ihe oriri m ga-eri nke unu na-amaghị.” Ihe ahụ o kwuru juru ndị na-eso ụzọ ya anya, nke mere ha ji jụwa ibe ha, sị: “Ọ̀ dị onye ọ bụla wetaara ya ihe ọ bụla ka o rie?” Jizọs weturu obi kọwaara ha ihe ọ na-ekwu. Ihe ọ gwara ha rukwara ha n’ahụ́. Ọ sịrị ha: “Ihe oriri m bụ ka m mee uche onye zitere m, ka m rụchaa ọrụ ya.”—Jọn 4:32-34.
Ọrụ Jizọs na-ekwu okwu ya abụghị ọrụ isi n’ubi were ọka wit, bụ́ nke fọrọ ihe dị ka ọnwa anọ tupu a malite ya. Kama, ihe Jizọs na-ekwu okwu ya bụ ọrụ iwere ndị mmadụ otú e si ewere ihe ubi. Ihe o kwuru gosiri na ọ bụ ya ka o bu n’obi. Ọ sịrị: “Welienụ anya unu lee ubi, na ihe a kụrụ na ha achaala maka owuwe ihe ubi. Onye na-ewe ihe ubi anatawalarị ụgwọ ọrụ ma na-ekpokọta mkpụrụ maka ndụ ebighị ebi, ka onye na-agha mkpụrụ na onye na-ewe ihe ubi wee ṅụrịkọọ ọṅụ.”—Jọn 4:35, 36.
O nwere ike ịbụ na Jizọs aghọtala ihe ụka ahụ ya na nwaanyị Sameria ahụ kparịtara rụpụtara. Ọtụtụ ndị Saịka nwere okwukwe na Jizọs n’ihi àmà nwaanyị ahụ gbaara ha. Ọ nọ na-agwa ha, sị: “Ọ gwara m ihe niile m mere.” (Jọn 4:39) N’ihi ya, mgbe ha si Saịka rute n’olulu mmiri ahụ, ha rịọrọ Jizọs ka ọ nọrọ gwakwuo ha okwu Chineke. Jizọs kwetara. Ihe a mekwara ka ọ nọkwuo ụbọchị abụọ na Sameria.
Ka ndị Sameria nọ na-ege ihe Jizọs na-ekwu, ọtụtụ ndị ọzọ kwerekwara na ya. Ha gwara nwaanyị ahụ, sị: “Ọ bụkwaghị n’ihi okwu gị ka anyị ji kwere; n’ihi na anyị anụwo n’onwe anyị, anyị makwaara na nwoke a bụ n’ezie onye nzọpụta nke ụwa.” (Jọn 4:42) N’eziokwu, nwaanyị Sameria ahụ gosiri nnọọ otú anyị nwere ike isi na-agba àmà banyere Kraịst. Anyị kwesịrị ịgwa ndị anyị na-ezi ozi ọma okwu otú ga-eme ka ha chọọ ịmụtakwu ihe.
Cheta na ọ fọrọ ọnwa anọ tupu a malite iwe ihe ubi ọka bali, bụ́ nke a na-ewe n’ebe ahụ n’oge opupu ihe ubi. Mgbe ahụ Jizọs nọ na-agwa ha okwu nwere ike ịbụ n’ihe dị ka n’ọnwa Nọvemba ma ọ bụ Disemba. Ihe ọ pụtara bụ na kemgbe oge Ememme Ngabiga nke afọ 30 gachara, Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya ejirila ihe dị ka ọnwa asatọ kụziere ndị mmadụ ihe na Judia, meekwa ha baptizim. Ha sizi ebe ahụ gawa ebe ugwu ha ga-esi ruo obodo ha bụ́ Galili. Gịnị ka ha ga-ahụ ebe ahụ?
OLE NDỊ BỤ NDỊ SAMERIA?
Ebe a na-akpọ Sameria dị n’agbata Judia na Galili. Judia dị ná mgbada, Galili adịrị ná mgbago. Mgbe Eze Sọlọmọn nwụchara, ebo iri dị n’ebe ugwu Izrel kewapụrụ onwe ha n’ebo Juda na Benjamin.
Ndị nọ n’ebo iri ahụ malitere ife chi nwa ehi. N’ihi ya, n’afọ 740 Tupu Oge Ndị Kraịst, Jehova hapụrụ ndị Asiria ka ha bibie Sameria. Ha dọọrọ ọtụtụ ndị Sameria ahụ n’agha ma kpọrọ ndị si ebe ọzọ dị n’Alaeze Ukwu Asiria dochie anya ha. Ndị a na-efe chi ụgha dị iche iche na ndị Izrel fọrọ n’ala ahụ lụrịtara di na nwunye. Ka oge na-aga, ndị bi na Sameria malitere ụdị ofufe nke ka nwere ụfọdụ nkwenkwe na ihe ụfọdụ e kwuru n’Iwu Chineke ka a na-eme, dị ka ibi úgwù. N’agbanyeghị nke ahụ, a gaghị asị na ha na-efe Chineke.—2 Ndị Eze 17:9-33; Aịzaya 9:9.
N’oge Jizọs, ndị Sameria nabatara akụkụ akwụkwọ nsọ ndị Mozis dere, ma ha anaghị aga efe ofufe n’ụlọ nsọ dị na Jeruselem. Ọ dịla anya ha nọwara n’ụlọ nsọ e wuru n’Ugwu Gerizim, nke dị Saịka nso, na-efe ofufe. Ha ka nọgidekwara na-efe ofufe n’ugwu ahụ mgbe e bibichara ụlọ nsọ ahụ. Iro dị́ n’etiti ndị Sameria na ndị Juu sikwara ezigbo ike n’oge ahụ Jizọs nọ n’ụwa.—Jọn 8:48.
Gịnị mere o ji ju nwaanyị Sameria ahụ anya na Jizọs kpanyeere ya ụka?
Gịnị ka Jizọs kụziiri nwaanyị ahụ gbasara mmiri nke na-enye ndụ nakwa ebe a ga-anọ na-efe Chineke?
Olee otú Jizọs si mee ka nwaanyị Sameria ahụ mata onye ọ bụ, oleekwa ụdị ofufe o kwuru na e kwesịrị ịna-efe Chineke?
Gịnị ka nwaanyị Sameria kwubiri banyere Jizọs, gịnịkwa ka o mere?
Gịnị ka Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya nọ na-eme kemgbe e mechara Ememme Ngabiga nke afọ 30?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Jizọs Akụziere Nwaanyị Sameria Ihe
jy isi 19 p. 48-51